လက်တင်ဘာသာအရေးအသား - ဝီကီပီးဒီးယား
(လက်တင်အက္ခရာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
လက်တင် သို့မဟုတ် ရောမအက္ခရာ သည် ဂန္ထဝင်လက်တင်အက္ခရာ များ၏အက္ခရာများကို အခြေခံ၍ အဆင့်ဆင့်အသုံးပြုလာသည့်သင်္ကေတ( အရေးအသား ) တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဧစထရက်စကန်တို့ အသုံးပြုသော ဂရိအက္ခရာ ၏ ကမ္မီယန် ဂရိ ပုံစံမှ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တင်အက္ခရာ အတော်များများတည်ရှိနေပြီး ဂန္ထဝင်လက်တင်အက္ခရာများ မှအရေးအသားစနစ်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲသည့်အရေးအသားစနစ်၊ အစုအဝေးနှင့်အသံထွက်စနစ်များကွာခြာပါးသည်။
အက္ခရာ အကြီး/အသေး နှင့် အက္ခရာ အရောအနှော
အများစုသော ဥရောပအနောက်ပိုင်း ဘာသာစကားများ : ပါဝင်သောဘာသာစကားများ လက်တင်ဘာသာစကား
များစွာသော တားကစ်ခ်ဘာသာစကားများ, ဖင်နိုယူးဂရစ်ဘာသာစကား နှင့် အက်စ်ကီးမိုး–အဲလီယူး ဘာသာစကားများ
အချို့သော အာဖရိကတိုက် ဘာသာစကားများ, အောစ်တရိုနီးရှန်းဘာသာစကားများ and ဩစထြိုအေးရှားတစ် ဘာသာစကားများ
~ဘီစီ (၇၀၀) – လက်ရှိခေတ်
ရှေးဟောင်း အစ်တာလစ်ခ် အရေးအသား
ဖရေးဇာ (သို့) ရှေးဟောင်း လီဆူဘာသာစကား (လီဆူ)
(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) အချို့သော အသံထွက် အက္ခရာများ၊ ဥပမာ IPA၊ IPA ကို မူရင်းအရေးအသားမရှိသော ဘာသာစကားများအတွက် အသုံးပြုလျက် ရှိကြသည်။
(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ပိုလ(ဒ်) အရေးအသား (မြောင် (တရုတ်ပြည်))
(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကဲရာလိုင်းကျွန်း အရေးအသား (Woleaian)
(သွယ်ဝိုက်၍) ချက်ရာကီး (အသံစနစ်)အရေးသားအက္ခရာစု
(သွယ်ဝိုက်၍, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ယတန် အရေးအသား (အလက်စကား အရေးသားဟုလည်း သိရှိသည်)
ရှေးဂျာမန်နစ်ဘာသာစကားများကို ရေးသားသည့် ရူးန် ခေါ် ရှေးဟောင်းစာတစ်မျိုး
See ယူနီကုတ်ဖြင့် လက်တင် အက္ခရာ
ဤဆောင်းပါးတွင် IPA အသံထွက် သင်္ကေတများ ပါဝင်သည်။ ပုံဖော်တင်ဆက်သည့် ထောက်ကူစနစ် မရှိပါက ယူနီကုဒ် အက္ခရာများအစား question marks, လေးထောင့်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားသင်္ကေတများကို မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။ IPA သင်္ကေတအတွက် မိတ်ဆက်လမ်းညွန်အား Help:IPA တွင်ကြည့်ပါ။
လက်တင်အက္ခရာ၌ပါဝင်သည့်အက္ခရာ၂၆လုံးသည် နိုင်ငံတကာအက္ခရာစဉ်နှင့် အိုင်အက်စ်အို အခြေခံလက်တင်အက္ခရာတွင်ပါသောအက္ခရာများ ဖြစ်သည်။
လက်တင် အက္ခရာအရေးအသားစနစ် အခြေခံထားပြီး အခြားဘာသာစကားများ၏ အရေးအသားစနစ်တွင် အက္ခရာစဉ်အလိုက်အသုံးပြုကြပါပြီး။  လက်တင်အက္ခရာကို ကမ္ဘာ့အရးအသားစနစ်၌ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လက်ခံကျင့်သုံးသူများသည် (ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ထိုလက်တင်အက္ခရာများကိုပင်အသုံးပြုကြသည်) ။ လက်တင်အက္ခရာကိုအနောက်တိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ ဥရောပဘာသာစကားအများစုတွင် သာမက ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများရှိဘာသာစကားများစွာတွင်ပါဝင်သောစံပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
၂.၁ ရှေးဟောင်း အစ်တားလစ်ခ် အက္ခရာ
၂.၂ ရှေးဟောင်း လက်တင် အက္ခရာ
ရှေးဟောင်းရောမ မှဆင်းသက်လာသော ဤအက္ခရာကိုရောမအက္ခရာသို့မဟုတ်လက်တင်အက္ခရာများဟုခေါ်သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုမှုရာဇဝင်ကိုကြည့်လျှင် ဤစကား၌ " ရောမလူမျိုးဝါဒ " သို့မဟုတ် "အချစ်ဇာတ်လမ်း" ဝေါဟာရကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရသည်။   ယူနီကုတ် သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (အိုအက်စ်အို) ကဲ့သို့“ လက်တင်”  အက္ခရာအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ 
ဂဏန်းစနစ်ကိုရောမဂဏန်းစနစ်ဟုခေါ်တွင်သည်။ သိပ္ပံသုံးဒြပ်စင်များ၏စုဆောင်းမှု, ရောမကိန်းဂဏန်းများ ၁၊ ၂၊ ၃ ကိန်းဂဏန်းများသည် ဟိန္ဒူ - အာရဗီဂဏန်းစနစ် အတွက်လက်တင် / ရောမစာလုံးများပါဝင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေးဟောင်း အစ်တားလစ်ခ် အက္ခရာပြင်ဆင်
ရှေးဟောင်း အစ်တားလစ်ခ် အက္ခရာ
ရှေးဟောင်း လက်တင် အက္ခရာပြင်ဆင်
↑ Haarmann 2004.
↑ Search results | BSI Group။ Bsigroup.com။ 2014-05-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Romanisation_systems။ Pcgn.org.uk။ 2014-05-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ISO 15924 – Code List in English။ Unicode.org။ 2013-07-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Search – ISO။ Iso.org။ 2014-05-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Haarmann၊ Harald (2004)။ Geschichte der Schrift [History of Writing] (ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်) (2nd ed.)။ München: C. H. Beck။ ISBN 978-3-406-47998-4။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်တင်ဘာသာအရေးအသား&oldid=701335" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။